Diyaarado Joog hoose ku duulaya oo cabsi geliyay dadka ku dhaqan Hobyo – SBC
Diyaarado Joog hoose ku duulaya oo cabsi geliyay dadka ku dhaqan Hobyo
Hobyo- Wararka ka imanaya Degmada Hobnyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaasi ay ka jiraan cabasho ka soo yeeereysa dadka deegaankaas taas oo ku aadan guuxa diyaarado aan la aqoon heybtooda oo deegaankaas Dul heehaabaya.
Qaar kamid ah dadka deegaankaas oo la soo xiriiray warqabadka SBC International ayaa sheegay in xiliyada habeenkii ay siweyn u dareemaan guuxa diyaarado ka imanaya dhanka badda islamarkaana dul heehaabaya hawada deegaankaas .
Waxa uu sheegay mid ka mid ah odayaasha deegaankaas in ay bulshada ku dhaqan Hobyo iyo deegaano hoosyimaada ay cabsi xoogan ka muujiyeen guuxa diyaaradahaas oo mararka qaar u eg kuwo si aad ah ugu soo dhowaanaya dhulka .
Dhinaca kale wararka ka imanaya isla gobolka Mudug ayaa sheegaya in ay ka soo cusboonaadeen xiisado colaadeed qeybo ka mid ah deegaanka cadaado, taas oo ay dhexmartay beelo halkaasi ku dhaqan .
Maalinnimadii shalay ayaa waxaa la xaqiijiyay in deegaano ay ka mid tahay Cadaado ay ka dheceen dagaalo beeleed dhexmaray laba beelood oo halkaasi wada dega, lamana xaqiijin karo khasaaraha dhabta ah ee halkaasi ka dhashay.
Deegaanada ku yaala xadka gobolada Galgaduud iyo Mudug ayaa waayadii ugu dambeysay waxaa ku soo laalaabanayay dagaalada dhexmaraya beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku dhaqan .